Duulimaadyada Garoonka Aadan Cadde oo Hakad la galiyay iyo Wasiir Gaadiidka oo ka hadlay - iftineducation.com
iftineducation.com – Duulimaadyada garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa hakad la galiyay maalinta arbacada ah ee ku beegan 8-da bisha Febraayo , waxaana maalintasai meel ku dhaw garoonka ka dhacaya Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiirka Gaadiidka Iyo Duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cali Axmed Jaamac Jengali ayaa sheegay in Maalinta Arbacada la hakiyay dhammaan Duulimaadyadii Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Waxa uu tilmaamay Wasiirka in Maalinta Arbacada magaalada Muqdisho ay ka dhaceyso Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya sidaa owgeed la go’aamiyay in la hakiyo dhamaan duulimaadyada garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Wasiirka ayaa ku wergaliyay dhamaan shirkadaha Diyaaradaha ee adeegsan jiray garoonka Aadan Cadde in la joojiyay duulimaadka diyaaradahii imaan jiray iyo kuwii ka dhoofi jiray magaalada Muqdisho maalinta arbacada ah.
Hakinta duulimaadyada garoonka Diyaaradaha Aadan Cdade lagu soo rogay ayaan wax saameyn ah ku yeelan doonin garoomada kale ee kuyaala gobolada dalka , waxaana kaliya la hakiyay howlihii garonka Aadan Cadde.
Daawo Sawirada: Hoolka lagu qabanayo Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo la diyaariyay